DIIWAANGII Fouga Zephyr FSX Dardar-gelinta v2.0 - Rikoooo
Fouga Zephyr FSX Dardargelinta v2.0
downloads 15 062
Saleeyey dugsiyada kooxda RESTAURAVIA ah iyadoo la kaashanayo of Faransiiska ROYALE Ciidamada Badda (RFN)
Fouga Zephyr ayaa ku soo beegmay laba gaadmada ah:
- A "Solo" qaabeynta (-hal tijaabo u taagan kursiga hore)
- Laba qaab kontoroola "DC" oo leh laba duuliye oo saaran. Noocan ayaa si gaar ah loogu habeeyay in lagu isticmaalo "Wadaagga Cockpit" ee ah FSX.
Dhowr kala duwan diyaarada dhab ah oo lagu daydo ka mid ah ayaa soo bandhigay in la sameeyo isticmaalkeeda ka hawl duuliyaha dalwaddii:
- Gearwheel sanka waa steerable halka Fouga dhabta ah waxaa ka fogaaday dhulka la joojiyaha
- GPS a, a VOR / DME, TACAN ah oo tijaabo ah si toos ah waxaa lagu soo bandhigay in labada daydo
- Dhowr nalalka dheeriga ah waxaa lagu dhejiyay on goluhu si ay u fududayso duulaya dalwaddii (qaybood, marsho degtey, airbrakes)
DIGNIIN! Noocan 2 waxaa loo soo saaray FSXDardar-gelinta. Ma ahan mid la jaan qaadaya Fula Simulator 2004 (FS9). Waafajinta ay la leedahay nooc kale oo ah FSX(SP1 - SP2) lama hubo.
Waxaa lagama maarmaan ah in uu akhriyo buug ka mid ah xirmo taas oo ay ku jiraan mid ka mid ah in bara sidii aad u dhul on markab side (aad wargelin ah)
Halkan waa hordhac video gaaban by Amentiba
Ma aha sida caanka ah sida uu "grand-walaalkaa", ee diyaaradaha Fouga Magister, Zephyr Fouga waa version ah ciidamada badda ee Fouga ah. Bilowga konton konton ah, ciidamada bada ee Faransiisku ee Maamulka, raadinaya hab qaran oo tababar duuliye ay, aad bayna u xiiso by barnaamijka Fouga ee horumarka Air Force Faransiis ah. version An ku habboon ee gaarka Navy la dhisay iyo 1956 July 31, ka Fouga CM170M noocooda ugu horeysay, oo la odhan jiray "Esquif", ka dhigay duulimaadkeedii ugu horeeyay. gadashada A of diyaarado 30 waxaa wargalin iyo gaarsiinta waxaa kullan u dhexeeya 1959 iyo 1961. Tani waxa ay ahayd amarka iibsiga hal of version diyaaradood baxshay CM175 "Zephyr" si waafaqsan diyaarado kale oo Faransiis Navy waqtigan (Aquilon, Alize) isticmaalaya magacyada dabaylaha '. Oo weliba Zephyr Fouga waxaa loo isticmaalaa by badda ee Faransiiska, inta badan la Foch iyo sidayaal Clemenceau. Inta lagu jiro in ka badan soddon sannadood, Zephyr ayaa muujiyay isku halaynta iyo Xooga tayada ay ku hoos jira xaalad isticmaalka daran.
kooxda An aerobatic duulaya Zephyr waxaa la abuuray 1961 by Navy Faransiiska
feature Gaarka ah airframe ka mid ah 110 a ° dabada balanbaalis xagal
The Raven: 12,15m
U muuqda mid aad u la mid ah diyaaradaha Fouga Magister, Zephyr waxaa si kastaba ha ahaatee gartaa transformations muhiim ah.
- Xoojiyo airframe
- Marsho degtey xoojiyeen ay ka mid yihiin shaqo gaar ah "in ka badan-ka badbadinin" sanka absorber lama filaan ah marsho
- Saraysa ciqaabtiisa in la oggolaado furitanka CATAPULT iyo degtey la ciqaabtiisa furay
- Jillaab badhidii iyo qalabka loogu talagalay inta lagu guda jiro wareejinta furitanka CATAPULT ah
- Xagal of weerar tilmaame (BIP) ee gacanta ku degtey side sax ah
Fouga Zephyr waxay leedahay laba matoorada Marbore II
mass ugu badan in higsiga 3450 kg
riixdaan ugu badan (heerka badda) 400 Dan (x2)
RPM ugu 22600 rpm
Author: Saleeyey dugsiyada kooxda RESTAURAVIA ah iyadoo la kaashanayo of Faransiiska ROYALE Ciidamada Badda (RFN)
Foomka RW Reworked ee Concorde RW FSX & P3D